I-Meteorology kwi-Net yiwebhusayithi ekhethekile ekusabalaliseni iMeteorology, i-climatology kanye nezinye izayensi ezihlobene nayo njengeGeology noma i-Astronomy. Sisabalalisa imininingwane eqinile ngezihloko nemibono efanelekile emhlabeni wesayensi futhi sikugcina usesikhathini ngezindaba ezibaluleke kakhulu.
Ithimba labahleli beMeteorología en Red lakhiwa iqembu le ochwepheshe be-meteorology, i-climatology kanye nesayensi yezemvelo. Uma nawe ufuna ukuba yingxenye yeqembu, unga sithumele leli fomu ukuze sibe ngumhleli.
Wathweswa iziqu kwi-Environmental Sciences kanye ne-Master in Environmental Education e-University of Malaga. Ngifunde imeteorology nesimo sezulu emjahweni futhi bengilokhu ngizifela ngamafu. Kule bhulogi ngizama ukudlulisa lonke ulwazi oludingekayo ukuze ngiqonde kancane iplanethi yethu nokusebenza komkhathi. Ngifunde izincwadi eziningi zemeteorology kanye namandla we-Atmosphere azama ukubamba lonke lolu lwazi ngendlela ecacile, elula nejabulisayo.
Ngiyi-Geologist, Master in Geophysics and Meteorology, kodwa ngaphezu kwakho konke ngiyazifela ngesayensi. Umfundi ojwayelekile wephephabhuku lezesayensi elivuliwe elifana neSayensi noma iMvelo. Ngenza iphrojekthi ku-Volcanic seismology futhi ngabamba iqhaza ezinhlelweni zokuhlola umthelela wezemvelo ePoland eSudetenland naseBelgium eNyakatho Yolwandle, kodwa ngaphesheya kwesimo esingaba khona, izintaba-mlilo nokuzamazama komhlaba kuyisifiso sami. Ayikho into efana nenhlekelele engokwemvelo yokugcina amehlo ami evulekile futhi ngigcine ikhompyutha yami isebenza amahora amaningi ukungazisa ngayo. Isayensi iwubizo lwami nentshisekelo yami, ngeshwa hhayi umsebenzi wami.
Ngakhulela emaphandleni, ngifunda kukho konke okwakungizungezile, ngakha ukuhlangana okungokwemvelo phakathi kwesipiliyoni nalokho kuxhumana nemvelo. Njengoba iminyaka iqhubeka, angikwazi ukuzibamba kodwa ngiheheke yilokho kuxhumana sonke esikuthwala ngaphakathi kwethu kumhlaba wemvelo.
Igama lami ngingu-Antonio, ngineziqu zeGeology, i-Master in Civil Engineering efakwe kwi-Civil Works kanye ne-Master in Geophysics and Meteorology. Ngisebenze njenge-geologist yasensimini nanjengombhali wombiko we-geotechnical. Ngiphinde ngenza uphenyo lwe-micrometeorological ukutadisha indlela yokuziphatha ku-CO2 yomkhathi nangaphansi komhlaba. Ngiyethemba ukuthi nginganikela ngohlamvu lwami lwesihlabathi ukuze ngenze isiyalo esithokozisayo njengesimo sezulu kufinyeleleke kuwo wonke umuntu.